> Resource > Video > Sida loo Beddelaan DV in MOV
DV, aka Digital Video, waxaa loola jeedaa macluumaadka video lagu duubay ay kamaradaha digital. Waxaa si wadajir ah ee ay soo Sony, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Canon, iyo tiro ka mid ah si fiican u yaqaan qalabka guriga Rafaa. Si aad u dajiyaan DV in iMovie u habaynta ama geliyaan iyaga YouTube, Facebook, vimeo u qaybsiga, waxaad u baahan tahay in ay marka hore iyaga loogu badalo in ay qaab MOV.
Haddii aadan fahmin wax technology Deji iyo kelmadaha, oo ma doonayo in aan tago in ilaa hadda, xirfad leh oo si sahlan loo isticmaali video Converter waa gargaar aad u weyn. Halkan, Wondershare Video Converter u Mac ( Video Converter for Windows) si weyn lagu talinayaa. Waxaa si toos ah u bixisaa qaab MOV QuickTime in si fiican u ciyaarayo oo Eebay size yar file asalka tayo sameecadda ah. Dhanka kale, iyada oo ay feature tafatirka embeded, waxaad si fudud oo dhaqso taaban karo ilaa aad videos. Hadda aynu ku dhex socdo geeddi-socodka si faahfaahsan ee version Mac ah, haddii aad rabto in aad si loogu badalo DV in MOV in nidaamka Windows, fadlan eeg User Guide in Windows .
Download Free version jirrabaadda kuwa aan DV in MOV Video Converter:
1 DV Load videos in DV in ay MOV video Converter
Bedelka aad videos si aad u computer by cable USB ama Firewire. Markaas jiid & hoos u files DV barnaamijka. Ama tagaan "File" menu, doortaan "Add Media Faylal ay" si ay u helaan files AVI aad rabto in aad ku dar. Haddii aad doonayso in aad qabato conversionn Dufcaddii, waxaad ku dari kartaa wax ka badan hal file.
Eeg suuqa kala barnaamijka hoos ku qoran, haddii aad rabto inaad ku biirto dhowr video clips galay mid ka mid file waaweyn, kaliya hubi ah "midowdo All Video" doorasho.
2 Set MOV sida qaab wax soo saarka
Hadda waxaad u timid inaad liiska qaab hoos-hoos, dooran DV ka "Video" sida qaab wax soo saarka. Haddii aadan ku qanacsanayn goobaha hadda video, waxaad iyaga qabsato kartaa adigoo gujinaya marsho ah "Dejinta" icon.
Haddii aad rabto in aad ka ciyaari faylasha la gediyay qalabka Apple sida iPod taabto, iPad, iPhone, iwm, kaliya aad u dooran kartaa presets ka "Qalabka" category, caadi ahaan waxay perferctly ciyaaro iyaga on.
Intii aanay video ah, waxaad samayn kartaa:
Delete qayb ka mid ah la rabin by falinjeeerka faylasha video.
Ka saar oo ka mid ah xuduudaha madow ay siii.
Habee video ah oo la beddelo video saamayn.
Just guji "Edit" image horyaalka video dhinaceeda si ay u helaan suuqa kala edit ah.
3 Start DV in ay diinta ka MOV
Marka qabsiga oo dhan ku qancay, haatan waxaad u timid inaad tallaabadii u dambaysay. Riix ah "Beddelaan" badhanka si ha u Video Converter u Mac samayn inteeda kale aad u. Just in labaad diinta lagu sameeyo.
Waa maxay dheeraad ah :
Wondershare Video Converter u Mac waa Converter video adag in ay taageertaa qaabab video caadiga ah sida MP4, M4V, wmv, Mpg, MPEG, MOV, TS, FLV, 3GP iwm iyo HD video sida AVCHD (MTS / M2TS), AVCHD Lite, mod / TOD, HD wmv, HD TS, HD Mpg iwm Waxa kale oo Macdan karaa Cajalado ka videos oo iyaga loogu badalo galay MP3, AAC, qaabab AC3.
Download Free hoos ku DV in Converter MOV:
Sida loo YouTube ka badbaadi Audio Si fudud
Sida loo Demux AVI Faylal ay la Multiple Video durdurro